मेरो कुरा - Khelpati Khelpati - Digital Khel Patrika
आफुलाई प्रमाणित गरेका दीप अधिकांश नयाँ खेलाडी बोकेर कुवेत हिडेको टिमबाट ठुलै अपेक्षा गर्नु एक समर्थकका लागि मुर्खता भन्दा फरक नहोला ।
बेइमानहरुको राज सत्यनारायण मण्डल युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएका बेला एकपटक प्रतिभा पुरस्कार छनौट समितिमा मलाई पनि राखिएछ ।
अल्मुताइरीको हिटलर अवतार एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाको काधमा चढेर नेपाली फुटबलमा नैतिक दोहन गरेको आरोप बारम्बार उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।
१५ महिनामा ६ मन्त्री, बैठकको जिम्मा सदस्यको ! अध्यक्षको नाताले यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ मन्त्री ज्यु, अहिले राखेपको बोर्डमा कति सदस्य बाहाल छन्, कति सदस्य हुदाँ एक तिहाई पुग्छ ?
खेलको संस्थागत विकास आजको आवश्यकता खेलले देशको प्रतिष्ठामा वृद्धि त गर्छ नै, स्वस्थ नागरिक पनि उत्पादन हुन्छ । साथै सबैलाई स्वस्थ रहनका लागि अभिप्रेरित पनि गर्दछ । खेललाई अझ व्यवस्थित गर्न सकिएको खण्डमा खेल आफैमा पनि स्वरोजगारीको एक उत्तम स्थल हो ।
यी गोपी, त्यो कराँते ! जापानमा हुन गईरहेको टोकियो ओलम्पिक सबैभन्दा चर्चाको विषय बनेको छ । तर नेपाली खेलकुदमा भने खुशियाली कतै देखिँदैन ।
गोपी प्रकरण – कहाँ भयो गल्ती ? कुनैपनि विधा छनोटको मापदण्ड नपुगेका राष्ट्रिले पनि कुनै एक विधामा एक जना खेलाडीले भाग लिन पाउने अधिकार दिएको हुन्छ ।
‘क्लब लाइसेन्सिङ खुल्ला गर्नुपर्छ’ एएफसीले क्लब लाइसेन्सिङ नभएका क्लबलाई ब्यवसायीक फुटबल खेल्न नपाउने नियम बनायो भने के गर्ने ?
सम्पादकीय : व्यावसायिक फुटबलको कोशेढुङ्गा यसका धेरै कारण छ । तर मुख्य कारण नेपाली फुटबलको घरेलु संरचना नै हो । नेपालका जति पनि डिभिजन क्लब छन्, ती सबै काठमाडौं वरपर छन् । नेपाली फुटबल काठमाडौं बाहिर जानै सकेनन् ।
‘एनएसएलले नेपाली फुटबलमा इतिहास कोर्नेछ’ कोरोना भन्दा अघि हामीले स्पोर्टस इभेन्ट म्यानेजमेन्टसँग हस्ताक्षर गरि सकेका थियौ । त्यस बेलादेखि कार्यक्रम हुने-नहुने विषयमा धेरैलाई शंका थियो । तर, हामी ढुक्क थियौ ।
'खेलकुद ऐन प्रगतिशिल देखिन्छ' ऐनमा मन्त्रालयले बढी अधिकार राखेको छ । बढी अधिकार केन्द्रित गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) स्वायत्त ढङ्गले चल्ने संस्था हो । धेरै नियन्त्रण गर्ने, लामो प्रक्रियामा चल्ने यसको चरित्र हैन । तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्ने । परिषद् तुरुन्त कार्यान्वयनमा जानुपर्ने संस्था हो ।
खेलकुदको बजेट भनेको पूर्वाधार मात्र हैन ! खेलकुद भनेको पूर्वाधार मात्र हो भन्ने सोच देखिएको छ । पदक जित्ने सानो खेलाडीको समूहलाई मात्र खेलकुद मानिएको छ ।